टिप्पणीहरू समान रूपान्तरणहरू छन्? | Martech Zone
टिप्पणीहरू समान रूपान्तरणहरू छन्?
मङ्गलबार, अक्टोबर 14, 2008 बिहीबार, अक्टुबर 3, 2019 Douglas Karr
यस खोजीमा मैले मेरो ब्लगको केहि विश्लेषण गरेँ जुन मेरो खोज इञ्जिन नतीजाहरू, मेरो सबैभन्दा लोकप्रिय ब्लग पोष्टहरू, धेरै टिप्पणीहरूको साथ पोष्टहरू, र पोष्टहरू जुन वास्तवमा परामर्श वा बोल्ने स to्लग्नताको कारण राजस्वमा परिणत भएको थियो।
त्यहाँ कुनै सम्बन्ध छैन।
मेरो सबैभन्दा लोकप्रिय पोष्टहरूको समीक्षा गर्दै, तपाईं वर्डप्रेस सम्पर्क फारम, हन्टिंगटन बैंक सक्स, मैले बेसक्याम्प छोड्नुभयो, र एक ईमेल ठेगानाको अधिकतम यातायात पाउनुहुन्छ पाउनुहुनेछ। ती पोष्टहरूले खोज इञ्जिन नतीजाहरूको लागि मार्ग नेतृत्व गर्दछ। ती पोष्टहरूमा पनि सबैभन्दा धेरै टिप्पणीहरू हुन्छन्। यद्यपि ती पोष्टहरूले मेरो जेबमा केवल एक ट्रलर (डलर) र एक कप कप कफी) प्रदान गरेको छ।
आईएमएचओ, टिप्पणीको सफलताको एक मात्र मापन को रूप मा उपयोग सामान्य छ, तर बहुमत कर्पोरेट ब्लग असफल.
प्रत्येक २०० आगन्तुक मध्ये १ मेरो ब्लॉगमा आउँदछ र टिप्पणी छोड्दछ। ती मध्ये एक सानो प्रतिशत डरलाग्दो हो, बहुमत मान्छे म संग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ… र धेरै कम, यदि कुनै हो भने, म संग व्यापार गर्छन्। वास्तवमा, यो गत बर्ष मेरो सब भन्दा ठूलो सम्झौताको एउटा त्यस्तो पोष्टबाट थियो जुन एक विशिष्ट टेक्नोलोजीमा मेरो दक्षता देखायो (र राम्रोसँग वर्गीकरण गरिएको), तर जे भए पनि कुनै प्रतिक्रिया थिएन।
समस्या ब्लगिंग होईन, अवश्य। मसँग मेरो ब्लगमा पाठकहरूको पर्याप्त मात्रा छ - तर म निरन्तर विषयवस्तुहरूमा लेख्ने निरन्तरताको अभाव छ जसले मलाई रूपान्तरण दिन्छ। साथै, मेरो साइडबारमा मलाई कार्य गर्न कल छैन।
मैले जहिले पनि मेरो सफलतालाई RSS उपभोक्ताहरूको संख्या र सगाई (मेरो ब्लगमा टिप्पणीहरू मार्फत) मापन गरेको छु। म त्यो रणनीति पुनर्विचार गर्दैछु! यदि म राजस्व चलाउन चाहन्छु र यसलाई व्यापार ब्ल्गको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छु भने, मैले मेरो सामग्रीलाई लक्षित गर्नु पर्छ सर्म खोजमा जित्नको लागि कुन आयले ड्राइभ गर्न सकीन्छ। म पनि एक प्रदान गर्न आवश्यक छ बाटो मेरो साइटमा ती रूपान्तरणहरू क्याप्चर गर्न र मापन गर्न।
म विश्वास गर्दिन कि कम समान रूपान्तरणहरु को टिप्पणी, न त ती तपाईको ब्लग को सफलता को माप हो।
जब सम्म तपाईं कुनै प्रकारको गतिविधिलाई व्यवसाय परिणाममा पign्क्तिबद्ध गर्न सक्नुहुन्न, यो केवल एक व्यर्थ मेट्रिक हो। त्यो भन्नु होइन कि म टिप्पणीहरू चाहान्दिनँ ... केवल यो हो कि मैले टिप्पणीहरूलाई प्रयोग गर्न सकीरहेको छैन ताकि मेरो ब्लगले कस्तो राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ।
टैग: उन्नत सामाजिक मिडियाक्षमतामाइकल Stelznerमोबाइल भुक्तानीपृष्ठ गतिसदस्यता रद्द गर्नुहोस्विकीलिटी
Noobie बाट एक Wii जीत!
म टिप्पणीको गैर-महत्वमा टिप्पणी गर्ने पहिलो हुन चाहन्छु। महान पोस्ट!
म सहमत छु टिप्पणीहरू सफलताको एकमात्र उपाय होइन।
ब्लगिङ मार्फत ब्रान्ड विकास गर्ने ठूलो अवसर छ। हामी एउटा डिजाइन र निर्माण कम्पनी हौं जुन चर्चहरूमा विशेषज्ञ छ। हामी चर्चका ग्राहकहरूको बारेमा उनीहरूसँग भएको भन्दा बढी ज्ञान र अन्तरदृष्टि विकास गरेर फरक गर्छौं। हाम्रो ब्लगले हामीलाई त्यो ज्ञान प्रदर्शन गर्न र चर्च नेतृत्व टोलीहरूलाई वार्तालापहरूमा संलग्न गराउन अनुमति दिन्छ जुन आशा छ कि उनीहरूलाई सेवाको लागि अझ राम्रोसँग सुसज्जित हुन्छ। हाम्रा ब्लगहरूले अझ शक्तिशाली रूपमा त्यसो गर्नको लागि हाम्रो रणनीतिको एक भागको रूपमा कार्य गर्दछ।
समयले पूरा मूल्य प्रकट गर्नेछ।